कस्तो छ सलमानको ‘भारत’ ट्रेलर ? (भिडियो) « THULOPARDA.COM: Entertainment News Portal From Nepal
कस्तो छ सलमानको ‘भारत’ ट्रेलर ? (भिडियो)
सलमान खान स्टारर चलचित्र ‘भारत’ को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । चलचित्रमा कटरीना कैफ, दिशा पाटनी, तब्बू, ज्याकी श्राफ, सुनील ग्रोवर लिड रोलमा छन् । चलचित्र जून ५ मा रिलिज हुँँदैछ । अली अब्बास जफरको निर्देशनमा बनेको यो फिल्म कोरियन चलचित्र ‘ओड टू माई फादर’ को हिन्दी रिमेक हो । चलचित्रको टिजर र लुक पोस्टर्स पहिलादेखि नै चर्चामा छ ।
३ मिनेट ११ सेकेण्डको ट्रेलरको सुरुवात भारतका पहिला प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको संवादबाट भएको छ । ट्रेलर पावर प्याक्ड र एगेजिङ छ । पूरै ट्रेलरमा सलमान छाएका छन् । ट्रेलरमा उनीसँगै कटरीना, दिशा, सुनील र ज्याकीको झलक पनि देख्न पाइन्छ । सलमान र कटरीनाको रोमान्टिक केमेस्ट्री पनि देखाइएको छ ।
चलचित्रमा सलमानले भारतको रोल निभाएका छन्, जसको जिन्दगी पूरै रंगीन छ । चलचित्रमा भारतको जिन्दगीको ७१ वर्षको यात्रा देखाइएको छ । ट्रेलरमा सलमान र कटरीनाबीच फिल्मांकन गरिएको संवाद दमदार छ । कटरीनाको लुक्स इम्प्रेसिभ छ । सुनील र दिशालाई पनि ट्रेलरमा राम्रो ‘स्क्रिन स्पेश’ मिलेको छ । ब्याकग्राउण्ड म्यूजिक पनि उत्कृष्ट छ ।
ट्रेलरमा सलमानलाई पाँच अलग-अलग लुक्समा देख्न सकिन्छ । उनको यो मसला चलचित्रमा एक्सन, रोमान्स, देशप्रेम, कमेडीको फ्लेवर रहेको ट्रेलरबाटै प्रष्ट हुन्छ । ‘भारत’ ले बक्सअफिसमा नयाँ रेकर्ड बनाउने अनुमान गरिएको छ । यो त्यही चलचित्र हो, जसमा पहिला प्रियंका चोपडा लिड रोलमा थिइन् । उनले हात झिकेपछि कटरीनाको प्रवेश भएको थियो ।